လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: March 2013
Huawei ဖုန်း Android Version 4.1.1 တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုဘဲ Myanmar Font ကို အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ
Friday, March 29, 2013 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ
Huawei ဖုန်း Android Version 4.1.1 တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုဘဲ Myanmar Font ကို အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ......Theme တစ်ခုတော့ Download ဆွဲရပါတယ်..
ပြီးတော့ SD Card ထဲက HWThemes ဆိုတဲ့ Folder ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ထည့်ပြီးတာနဲ့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ Theme ထဲမှာ Elegance ဆိုတဲ့ Theme တစ်ခုရောက်နေပါမယ်....
အဲ့ဒီ့ Theme ကို Apply လုပ်လိုက်ပါ။
Theme With Font ဆိုတာလေးရွေးပေးလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင်မြန်မာ Font ကိုသုံးလို့ရပါပြီ...အောက်မှာ Theme ကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်...
Credit to: http://it-ghost.blogspot.com/2013/03/huawei-android-411-theme-with-myanmar.html
တရုတ်နိုင်ငံက လာတဲ့ External Battery တဲ့...
Wednesday, March 27, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
အတုအပ ပစ္စည်းများမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ...
နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ, ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ,
Wednesday, March 27, 2013 Multimedia
ဒီကောင်လေးက Xilisoft DVD Subtitle Ripper လေး..။ ကျနော့်ဆီမှာ ခဏခဏမေးခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ Video တွေမှာ မြန်မာစာတန်းထိုးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ကောင်လေးပါ..။ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ရအောင် Key လေးတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..။ အောက်မှာ ကျနော် ဒီကီးတွေနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးဖြစ်အောင် လုပ်ပြပေးထားပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးရဲ့ အသုံးပြုပုံကို သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြထားတာမို့ အသုံးပြုပုံကို လေ့လာချင်တဲ့ သူများကတော့ ဒီနေရာကနေ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးကို လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.4 MB ရှိပါတယ်..။
ပါတ်စ်ဝါဒ့်က ကျနော့် Blog ရဲ့ လိပ်စာ http://lwinminbo.blogspot.com/ ပါပဲ..။ Get Unlock Code ကို အကောင့်ဖွင့်ပြီး ယူစရာ မလိုတော့ပဲ Unlock Code ကျော်နည်း ပိုစ့်အတိုင်း အဲ့ဒီဒေါင်းလော့လင့် ယူရမယ့်စာမျက်နှာ ရောက်ရင် နောက်က /new.php စာသားကို Browser ရဲ့ Address Bar မှာထပ်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ..။ ဒီဖိုင်ကို ဒေါင်းယူဖို့ လင့်တွေကို ဝင်ယူလို့ ရသွားပါပြီ..။
အောက်ကပုံလေးတွေအတိုင်း ကီးထည့်ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပါပြီ..။ အသုံးပြုတတ်အောင် မူရင်းဆိုဒ်မှာပဲ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဗျာ..။
Credit to http://lwinminbo.blogspot.com/2013/03/xilisoft-dvd-subtitle-ripper-11200402.html
Viber Apk 8MB....
Tuesday, March 26, 2013 Android Apps & Games
ဒီ Viber လေးကတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျာ အားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီ Viber ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ တခြားဘက်က ဖုန်း ခေါ်လာတာကိုလဲ စောင့်စရာမလို့ပါဘူး
က ဖုန်းနံပတ်ဖြည့်ပီးရင် လေ ကုဒ်ထည့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ အောက် CLICK HERE မနိုပ်နဲ့နော် ပီးရင် အဲနေရာမှာပဲ ခဏစောင့်လိုက် သူ့ဟာသူ ကုဒ်ဖြည့်ပေးလိမ့်ပါမယ်။တခါတည်း Auto Coad တွေဝင်ပြီလုပ်သွားတာပါ။ရေးသားသူ ကို Than Naing Ooဖြစ်ပါတယ်။
Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်ခြင်း
Tuesday, March 26, 2013 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ
Credit to : http://myanaungtharr.blogspot.com/2013/03/sony-xperia-j-st26i-110a75-root.html
Monday, March 25, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
ဒီဇယ်နဲ့ ဓါတ်ဆီ မှားဖြည့်မိလို့ စက်ချွတ်ယွင်းသွားတဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရောက် အမေရိကန်သမတ အိုဘားမားရဲ့ စီးတော်ယာဉ် limousine ...
Monday, March 25, 2013 ထွေရာလေးပါး
Monday, March 25, 2013 Android Apps & Games
Tin Soe: How to root galaxy s3 mini (GT-I8190N)..? Please help me.>>Thanks.
Root မလုပ်ခင် ဖုန်းကို Backup လုပ်ထားပါ...။
လိုအပ်တဲ့ Firmware ကို ဒေါင်းပါ ... 500 MB ကျော်ရှိပါတယ် .... ရလာတဲ့ Zip file ကို Extract လုပ်ထားပါ။ .tar file တစ်ခုရပါမယ်။ Odin3ကိုဖွင့်ပါ။ PDA နေရာကတဆင့် စောစောက .tar file ကိုထည့်ပါ။
ဖုန်းကို Download Mode ထဲကိုဝင်ပါ။ (volume down+home+power button ကိုတွဲနှိပ်ပြီး download mode ထဲဝင်ရပါမယ်။) volume up ကို တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါ။
ဖုန်းကို computer နဲ့ချိတ်ပါ။ Odin က ဖုန်းကို သိသွားပြီဆိုရင်တော့ Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Credit to http://www.winkabarkyaw.net
Thursday, March 21, 2013 ဓါတ်ပုံ | ထွေရာလေးပါး
Huawei ဖုန်း Android Version 4.1.1 တွေမှာ root လုပ...
Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်ခြင်...
ဒီဇယ်နဲ့ ဓါတ်ဆီ မှားဖြည့်မိလို့ စက်ချွတ်ယွင်းသွားတ...
သစ်သားမီးခြစ်ဆံတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာ.......
ခင်ပွန်း ၅ ဦး တပြိုင်တည်း ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့ အမ...
Xilisoft HD Video Converter 7.7.2 Build 20130313 F...
IPhone 4S jailbreak (IOS 6.1.2 / 6.1.1 / 6.1 / 6.0...
I Phone 4S Jailbreak ( IOS 5.0.1 )
I Phone 4S Jailbreak ( IOS 5.1.1 )
I Phone - I Pod အသုံးပြုနည်း လမ်းညွန် မြန်မာစာအုပ်...
iOS Apps များ Crack နည်း
Luxand Blink! Pro 2.4 Full Version ( 20 MB )
Titanium Backup Pro v6.0.4 apk 6MB
Computer Screen ကို ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ FastS...
ဖုန်းထဲမှာ ဖတ်နိုင်စေဖို့ ဘလော့ရဲ့ APK လုပ်နည်းလေး...
Facebook ကို Hack နည်းနှင့် လုံခြုံအောင်ထားနည်း စာ...
Samsung Galaxy ဖုန်းတွေ tablet တွေမှာ Root မလုပ်ပဲ...
အဆင်မြင့်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာ...
Android Tuner v0.8.8 Apk 4MB
Gallery Lock Pro v1.2 for Android
Easy Zawgyi Installer for Android (via Windows, OS...
သင့်အတွက် ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကို တွက်ချက်ပေးမယ့် And...
ကွန်ပျူတာ shutdown ပိတ်တာ မြန်စေခြင်ရင်...
Mobile Reviews: Samsung Galaxy S4
CameraPro v2.49 Apk 670KB
Zombie မိတ်ကပ်ပညာ.. (+18)
ဒီလှိုင်းနဲ့ ဒီဘ၀ ဒီမျှသာ...
သူတို့ဆီက ဖန်တီးမှု .....
ကလစ် ၂ ချက်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် အမြဲတမ်းအသုံးပြုသွား...
Kaspersky 2013 + Trial Reset + Key Files (updated)...
Kaspersky Keys for All Product (13/3/2013)
New Nokia Zawgyi Keyboard...
iOS 6.1 အတွက် Unlock